SEO နဲ့ SEM ကွာခြားချက် - WebsiteDesign.com.mm
Static HTMLတည်းဖြတ်ရန် မလိုသော Website
Dynamic CMSတည်းဖြတ်နိုင်သော Website
Logo & Graphic DesignLogo (လိုဂို) & Graphic Design
Internet Marketingအင်တာနက်တွင် ကြော်ငြာခြင်းအမျိုးမျိုး
SEO နဲ့ SEM ကွာခြားချက်
3:19pm on Sunday 31st March 2019
သင့်လုပ်ငန်းကို Website နဲ့ တကွတွဲဖက် လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် Website တွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ SEO (သို့မဟုတ်) SEM နည်းပညာတွေ အကြောင်းကို သိထားဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ SEO နဲ့ SEM ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ခုလုံးကိုတော့ Search Engine Advertising (သို့) Search Marketing လို့လူသိများကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကလည်း Website တွေကို Search Engine ပေါ်မှာ လူသိများအောင်၊ မြင်ရအောင် ကြော်ငြာပေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် SEO နဲ့ SEM ရဲ့ကွားခြားချက်လို့ ရေးထားရသလည်း ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ SEO(Search Engine Optimization) ကတော့ သင့်ရဲ့ Website ကို Search Engine ပေါ်မှာ Ranking ကိုအကောင်းဆုံး ရအောင်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ SEM(Search Engine Marketing) ကတော့ သင့် Website ကို Visitor တွေပိုမြင်စေရန်အတွက် Search Engine ကို ပိုက်ဆံပေးပြီးကြော်ငြာတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
SEO ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Website ကို Google (Search Engine )ရဲ့ထိပ်ဆုံးစာမျက်နှာမှာ ရောက်ရှိစေပြီး Website ကိုလူကြည့်ရှုမှုများအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ SEO ကရရှိတဲ့ Traffic ကလည်း Search Engine က Free ရရှိတာဖြစ်တဲ့ အတွက် Long Term အတွက် ကုန်ကျမှုသက်သာပြီး Website Ranking တက်စေဖို့အတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ Search Engine Advertising နည်းလမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက ကိုယ့်ရဲ့ Website Ranking တက်လာဖို့ အတွက် Long Term အတွက် ပြုလုပ်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် အချိန်တော့ နည်းနည်းပေးရပါတယ်။
SEM ဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Website ကို Search Engine ပေါ်မှာကြော်ငြာခြင်းနည်း လမ်းတစ်မျိုးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြော်ငြာ Link ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က Click နှိပ်လိုက်တိုင်း Website ပိုင်ရှင်က Google သို့ပိုက်ဆံပေးရ/ပေးချေရသောနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကိုချက်ခြင်းလက်ငင်း အဓိကဦး စားပေး သူတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ကိုယ့် Website ကို လူစိတ်ဝင်စားမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ စသဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ပြီး အလွယ်တကူသုံးသပ် နိုင်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ SEM ကိုတော့ Website စလုပ်တဲ့သူတွေ၊ Event/Promotion ရှိတဲ့ Website တွေ အတွက်အသုံးပြုသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေကတော့ SEO နဲ့ SEM ရဲ့ကွာခြားချက်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ Website တွေနဲ့ သင့်တော်မဲ့ နည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
Ref - reliablesoft
: No. 82, 1st Floor, Lan Thit St,
Lanmadaw Tsp, Yangon 11131, Myanmar.
: အမှတ် (၈၂)၊ ပထမထပ်၊ လမ်းသစ်လမ်း၊
: ၀၁ ၂၃၀ ၃၂၇၀ , ၀၉ ၅၁ ၆၈၁၅၂, ၀၉ ၇၈၃၉ ၁၃၁၂၃
တည်းဖြတ်ရန် မလိုသော Website
Logo (လိုဂို) & Graphic Design